မနျခကျြစတာမွို့မှာ ကှငျးလယျဘုရငျကဘယျသူလဲ…?ဖာနနျဒကျ…လား၊ဒီဘရိုငျးနား…လား၊ ဘယျသူပိုကောငျးလဲ ? – Premier League Special
မနျခကျြစတာမွို့မှာ ကှငျးလယျဘုရငျကဘယျသူလဲ…?ဖာနနျဒကျ…လား၊ဒီဘရိုငျးနား…လား၊ ဘယျသူပိုကောငျးလဲ ?
မနျခကျြစတာမွို့ရဲ့အသငျး နှဈသငျးဟာ ဥရောပ ဘောလုံး လောကမှာ အကောငျးဆုံးအသငျးတှထေဲမှာ ပါဝငျနခေဲ့တာဟာ နှဈအတျောကွာခဲ့ပါပွီ။ ယူနိုကျတကျအသငျးကတော့ ဖာဂူဆနျနောကျပိုငျး နညျးပွ(၄)ဆကျမွောကျရောကျတော့မှသာ အသငျးကို အရငျလို အခွအေနဆေီပွနျရောကျနိုငျဖို့ လမျးစတှခေဲ့ရတာပါ။
အထူးသဖွငျ့ ဘရူနိုဖာနနျဒကျ အသငျးကို ရောကျလာတဲ့အခြိနျကမှ ကောငျးမှနျတဲ့ ကှငျးလယျဖနျတီးမှုတှကေို ပွနျလညျမွငျတှခေဲ့ရတာပါ။ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကှငျးလယျကစားသမား ပေါ့ဂျဘာ ရှိနပေမေယျ့ အသငျးနဲ့ အံဝငျမှုမရှိသလို နညျးပွတှနေဲ့ အဆငျမပွဖွေဈပွီး လုပျအားနှုနျးကဆြငျးနခေဲ့တာကွောငျ့ ယူနိုကျတကျကှငျးလယျဟာ အသကျမဲ့ နခေဲ့တာအတျောကွာခဲ့ပါပွီ။
ဒီအခြိနျမှာ မွို့ခံပွိုငျဘကျမနျစီးတီးကတော့ ဝုဗျဘတျကနေ ကီဗငျ ဒီဘရိုငျးနားကို ချေါယူပွီး သူတို့ အသငျးရဲ့ ကှငျးလယျမှာ အသငျးနဲ့ခြိတျဆကျဖနျတီးမှုတှလေုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီဘရိုငျးဟာလညျး ခယျြလျဆီးအသငျးမှာမအောငျမွငျခဲ့ပမေယျ့ မနျစီးတီးအသငျးမှာတော့ သူ့ရဲ့ ကစားရတဲ့နရောမှာ အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ပွီး ပရီမီးယားလိဂျရဲ့ အကောငျးဆုံးကှငျးလယျကစားသမားဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီညမှာတော့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ကှငျးလယျ ပွိုငျဆိုငျမှုနဲ့ ဖနျတီးနိုငျမှုတှကေို ထပျမံတှမွေ့ငျရတော့မှာပါ။
ဘရူနိုဖာနနျဒကျ နှငျ့ ကီဗငျ ဒီဘရိုငျးနားတို့ဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နှငျ့ မနျခကျြစတာ စီးတီးအသငျးတှရေဲ့ အဓိက ကွယျပှငျ့ ကစားသမားတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျသူက အသငျးကို ပိုပွီးအကြိုးပွုနိုငျသလဲ? ဇနျနဝါရီ ( ၁ ) ၊ ၂၀၂၀ ကတညျးက လကျရှိအခြိနျထိ ပရီးမီးယားလိဂျ မှတျတမျးတှကေို ကွညျ့ပွီး ဒီကစားသမား နှဈဦးအနကျ ဘယျသူက အသငျးအတှကျ ပိုအရေးကွီးလဲဆိုတာ တငျပွသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဂိုး ပါဝငျပတျသကျမှု… ဖာနနျဒကျက ၂၀၂၀ နှရောသီ အပွောငျးအရှမှေ့ာ ယူနိုကျတကျကို ရောကျလာပွီး ဖဖေျောဝါရီ ( ၁ ) ရကျနေ့ ၊ ဝုဗျနဲ့ ဂိုးမရှိ သရကေတြဲ့ ပှဲမှာ စတငျပှဲထှကျခှငျ့ရခဲ့တယျ။ တခွားကစားသမားတှထေကျ တဈလ နောကျကပြမေယျ့ ပျေါတူဂီကှငျးလယျလူဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ( ၂၀၂၀ ) နှဈ အစပိုငျးကနေ လကျရှိအခြိနျထိ ဂိုးပါဝငျပတျသကျမှု အမြားဆုံးကစားသမား ဖွဈပါတယျ။
ဖာနနျဒကျဈဟာ ဂိုးပါဝငျ ပတျသကျမှု ( ၃၃ ) ကွိမျထိရှိပွီး ဒုတိယနရောမှာရှိတဲ့ လကျရှိ ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံ လီဗာပူးအသငျးတိုကျစဈမှူး ဆာလကျထကျ ( ၂ ) ကွိမျ ပိုမြားပါတယျ။ ကီဗငျ ဒီဘရိုငျးနားက ( ၂၅ ) ကွိမျနဲ့ ပဉ်စမနရောမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။
သှငျးဂိုး… ဖာနနျဒကျက ပရီးမီးဟားလိဂျကို ရောကျရှိလာခြိနျကစပွီး လကျရှိအခြိနျထိ ( ၁၉ ) ဂိုး သှငျးယူထားပွီး ပငျနယျတီး သှငျးဂိုး ( ၉ ) ဂိုး ပါဝငျပါတယျ။ ( ၂၃ ) ဂိုး သှငျးယူထားတဲ့ ဆာလကျတဈဦးတညျးကသာ ဘရူနိုထကျ ပိုမြားနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒီဘရိုငျးနားအနနေဲ့ စုစုပေါငျး ( ၉ ) ဂိုး သှငျးယူထားပွီး ပငျနယျတီကနေ ( ၄ ) ဂိုး သှငျးယူထားပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ ကှငျးလယျကစားသမားက ဒီရာသီမှာ ပွိုငျပှဲစုံ ( ၁၅ ) ဂိုး သှငျးယူထားပွီး ဒီဘရိုငျးနားကတော့ ( ၃ ) ဂိုးသာ သှငျးယူထားနိုငျပါတယျ။
ကှငျးလယျ ဖနျတီးမှု…ပွီးခဲ့တဲ့နှဈအတှငျး ဒီဘရိုငျးနားက ပရီးမီးယားလိဂျမှာ king of assist ဖွဈခဲ့တယျ။ မနျစီးတီး playmaker က အသငျးဖျောတှအေတှကျ ( ၁၆ )ဂိုး ဖနျတီးပေးခဲ့ပွီး ဘရူနိုထကျ ( ၂ ) ဂိုး ပိုမြားတာ တှရေ့တယျ။ သူတို့ ( ၂ ) ဦးကလှဲပွီး ၂၀၂၀ ၊ ဇနျနဝါရီ ( ၁ ) ရကျနကေ့ စလို့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဂဏနျး ( ၂ ) လုံးထိ ဖနျတီးမှုပွုလုပျနိုငျသူအနနေဲ့ ဟာရီကိနျး တဈဦးတညျးသာ ရှိပွီး ( ၁၁ ) ဂိုး ဖနျတီးပေးထားပါတယျ။
အသကျ ( ၂၉ ) နှဈအရှယျ ဒီဘရိုငျးနားက ဒီရာသီမှာ ( ၈ ) ဂိုး ဖနျတီးပေးထားပွီး ဖာနနျဒကျဈက ( ၇ ) ဂိုး ဖနျးတီးပေးထားကာ ဂိုးဖနျတီးပေးမှု သတျမှတျခကျြမှာ ဟယျရီကိနျးရဲ့ နောကျ ဒုတိယ နှငျ့တတိယနရောမှာ ရပျတညျလကျြ ရှိပါတယျ။
အသငျးအပျေါ သကျရောကျမှု … ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ဆိုးရှားရဲ့ အသငျးက ဖာနနျဒကျ မပါတဲ့ ပှဲစဉျအနိုငျရရှိမှုနှုနျးက ( ၃၇.၅ ) ရာခိုငျနှုနျးထိ ရှိပွီး ဘရူနို ပှဲထှကျပါဝငျခှငျ့ရတဲ့ ပှဲစဉျတှမှော ( ၆၄.၃ )ရာခိုငျနှုနျး အနိုငျရထားပါတယျ။ ပျေါတူဂီ play maker ပါဝငျပါက ယူနိုကျတငျအနနေဲ့ သှငျးဂိုးတှေ ပိုရပွီး ပေးဂိုးနညျးကာ ရမှတျပို သိမျးပိုကျနိုငျလရှေိ့တယျ။
ဒါပမေယျ့ ကီဗငျ ဒီဘရိုငျးနားကလညျး အလားတူ သကျရောကျမှုမြိုးရှိနတော တှရေ့တယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ( ၂ ) ရာသီအတှငျး ဒီဘရိုငျးနားအနနေဲ့ ပှဲထှကျလူစားရငျးကနေ ( ၈ ) ကွိမျ ခနျြလှပျခွငျး ခံခဲ့ရတယျ။ ဒီဘရိုငျးနား ပါဝငျတဲ့ ပှဲစဉျတှမှော စီးတီးရဲ့ အနိုငိရရှိမှုက ( ၇၀ ) ရာခိုငျနှုနျးထိ ရှိပမေယျ့ ဒီဘရိုငျးနား မပါဝငျပါက အနိုငျရရှိမှုက ( ၃၇.၅ ) ရာခိုငျနှုနျးထိ ကဆြငျးသှားတာ တှရေ့တယျ။
မန်ချက်စတာမြို့မှာ ကွင်းလယ်ဘုရင်ကဘယ်သူလဲ…?ဖာနန်ဒက်…လား၊ဒီဘရိုင်းနား…လား၊ ဘယ်သူပိုကောင်းလဲ ?
မန်ချက်စတာမြို့ရဲ့အသင်း နှစ်သင်းဟာ ဥရောပ ဘောလုံး လောကမှာ အကောင်းဆုံးအသင်းတွေထဲမှာ ပါဝင်နေခဲ့တာဟာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ ဖာဂူဆန်နောက်ပိုင်း နည်းပြ(၄)ဆက်မြောက်ရောက်တော့မှသာ အသင်းကို အရင်လို အခြေအနေဆီပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ လမ်းစတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ အထူးသဖြင့် ဘရူနိုဖာနန်ဒက် အသင်းကို ရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှ ကောင်းမွန်တဲ့ ကွင်းလယ်ဖန်တီးမှုတွေကို ပြန်လည်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကွင်းလယ်ကစားသမား ပေါ့ဂ်ဘာ ရှိနေပေမယ့် အသင်းနဲ့ အံဝင်မှုမရှိသလို နည်းပြတွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး လုပ်အားနှုန်းကျဆင်းနေခဲ့တာကြောင့် ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်ဟာ အသက်မဲ့ နေခဲ့တာအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ မြို့ခံပြိုင်ဘက်မန်စီးတီးကတော့ ဝုဗ်ဘတ်ကနေ ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနားကို ခေါ်ယူပြီး သူတို့ အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်မှာ အသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဖန်တီးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘရိုင်းဟာလည်း ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာမအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် မန်စီးတီးအသင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ ကစားရတဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ပရီမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီညမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကွင်းလယ် ပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ဖန်တီးနိုင်မှုတွေကို ထပ်မံတွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။
ဘရူနိုဖာနန်ဒက် နှင့် ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနားတို့ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နှင့် မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းတွေရဲ့ အဓိက ကြယ်ပွင့် ကစားသမားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူက အသင်းကို ပိုပြီးအကျိုးပြုနိုင်သလဲ ? ဇန်နဝါရီ ( ၁ ) ၊ ၂၀၂၀ ကတည်းက လက်ရှိအချိန်ထိ ပရီးမီးယားလိဂ် မှတ်တမ်းတွေကို ကြည့်ပြီး ဒီကစားသမား နှစ်ဦးအနက် ဘယ်သူက အသင်းအတွက် ပိုအရေးကြီးလဲဆိုတာ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂိုး ပါဝင်ပတ်သက်မှု… ဖာနန်ဒက်က ၂၀၂၀ နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့မှာ ယူနိုက်တက်ကို ရောက်လာပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁ ) ရက်နေ့ ၊ ဝုဗ်နဲ့ ဂိုးမရှိ သရေကျတဲ့ ပွဲမှာ စတင်ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ တခြားကစားသမားတွေထက် တစ်လ နောက်ကျပေမယ့် ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်လူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ( ၂၀၂၀ ) နှစ် အစပိုင်းကနေ လက်ရှိအချိန်ထိ ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှု အများဆုံးကစားသမား ဖြစ်ပါတယ်။
ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ဂိုးပါဝင် ပတ်သက်မှု ( ၃၃ ) ကြိမ်ထိရှိပြီး ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ လီဗာပူးအသင်းတိုက်စစ်မှူး ဆာလက်ထက် ( ၂ ) ကြိမ် ပိုများပါတယ်။ ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနားက ( ၂၅ ) ကြိမ်နဲ့ ပဉ္စမနေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
သွင်းဂိုး… ဖာနန်ဒက်က ပရီးမီးဟားလိဂ်ကို ရောက်ရှိလာချိန်ကစပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ( ၁၉ ) ဂိုး သွင်းယူထားပြီး ပင်နယ်တီး သွင်းဂိုး ( ၉ ) ဂိုး ပါဝင်ပါတယ်။ ( ၂၃ ) ဂိုး သွင်းယူထားတဲ့ ဆာလက်တစ်ဦးတည်းကသာ ဘရူနိုထက် ပိုများနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘရိုင်းနားအနေနဲ့ စုစုပေါင်း ( ၉ ) ဂိုး သွင်းယူထားပြီး ပင်နယ်တီကနေ ( ၄ ) ဂိုး သွင်းယူထားပါတယ်။ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်ကစားသမားက ဒီရာသီမှာ ပြိုင်ပွဲစုံ ( ၁၅ ) ဂိုး သွင်းယူထားပြီး ဒီဘရိုင်းနားကတော့ ( ၃ ) ဂိုးသာ သွင်းယူထားနိုင်ပါတယ်။
ကွင်းလယ် ဖန်တီးမှု… ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ဒီဘရိုင်းနားက ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ king of assist ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မန်စီးတီး playmaker က အသင်းဖော်တွေအတွက် ( ၁၆ )ဂိုး ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး ဘရူနိုထက် ( ၂ ) ဂိုး ပိုများတာ တွေ့ရတယ်။ သူတို့ ( ၂ ) ဦးကလွဲပြီး ၂၀၂၀ ၊ ဇန်နဝါရီ ( ၁ ) ရက်နေ့က စလို့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဂဏန်း ( ၂ ) လုံးထိ ဖန်တီးမှုပြုလုပ်နိုင်သူအနေနဲ့ ဟာရီကိန်း တစ်ဦးတည်းသာ ရှိပြီး ( ၁၁ ) ဂိုး ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အသက် ( ၂၉ ) နှစ်အရွယ် ဒီဘရိုင်းနားက ဒီရာသီမှာ ( ၈ ) ဂိုး ဖန်တီးပေးထားပြီး ဖာနန်ဒက်စ်က ( ၇ ) ဂိုး ဖန်းတီးပေးထားကာ ဂိုးဖန်တီးပေးမှု သတ်မှတ်ချက်မှာ ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ နောက် ဒုတိယ နှင့်တတိယနေရာမှာ ရပ်တည်လျက် ရှိပါတယ်။
အသင်းအပေါ် သက်ရောက်မှု … ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ ဆိုးရှားရဲ့ အသင်းက ဖာနန်ဒက် မပါတဲ့ ပွဲစဉ်အနိုင်ရရှိမှုနှုန်းက ( ၃၇.၅ ) ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိပြီး ဘရူနို ပွဲထွက်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ( ၆၄.၃ )ရာခိုင်နှုန်း အနိုင်ရထားပါတယ်။ ပေါ်တူဂီ play maker ပါဝင်ပါက ယူနိုက်တင်အနေနဲ့ သွင်းဂိုးတွေ ပိုရပြီး ပေးဂိုးနည်းကာ ရမှတ်ပို သိမ်းပိုက်နိုင်လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနားကလည်း အလားတူ သက်ရောက်မှုမျိုးရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ( ၂ ) ရာသီအတွင်း ဒီဘရိုင်းနားအနေနဲ့ ပွဲထွက်လူစားရင်းကနေ ( ၈ ) ကြိမ် ချန်လှပ်ခြင်း ခံခဲ့ရတယ်။ ဒီဘရိုင်းနား ပါဝင်တဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ စီးတီးရဲ့ အနိုငိရရှိမှုက ( ၇၀ ) ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိပေမယ့် ဒီဘရိုင်းနား မပါဝင်ပါက အနိုင်ရရှိမှုက ( ၃၇.၅ ) ရာခိုင်နှုန်းထိ ကျဆင်းသွားတာ တွေ့ရတယ်။
ဂရြတျရဲ့ရိနျးဂြားဈအသငျး ဘယျအခြိနျ အစောဆုံးစကော့တလနျအမှတျပေးခနျြပီယံဖွဈနိုငျလဲ
မနျစီးတီးနဲ့တှဆေုံ့မယျ့ပှဲမှာ ဆိုးလျရှား ဘယျလိုဗြူဟာတှထေုတျသုံးပွီး ဘယျ သရဲနီတပျသားတှကေို ရှေးခယျြပှဲထုတျလာမလဲ…?